ရွှေစက်တော် တောရိုင်း တိရစ္ဆာန် ဘေးမဲ့တောတွင် စောင့်ရှောက်ထားသည့် ရှားပါးမြန်မ့ာ ကြယ်လိပ်မျ - Yangon Media Group
မင်းဘူး၊ ဒီဇင်ဘာ ၂၂
ကမ္ဘာ ပေါ်တွင် မြန်မာနိုင်ငံမှာသာရှိပြီး ရှားပါးသည့်မြန်မာ့ကြယ်လိပ်ခေါ် ပန်းလိပ်များကို မျိုးတုံးပျောက်ကွယ် မသွားစေရန် ရွှေစက်တော်တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ဘေးမဲ့တောတွင် စောင့် ရှောက်ထားရာ နှစ်ပေါင်း ၂ဝ ကျော်အတွင်း အကောင်ရေ ၆၄ဝ ခန့် တိုးလာကြောင်း ရွှေစက်တော် တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်ဘေးမဲ့တောမှသိရသည်။
အဆိုပါ မြန်မာ့ကြယ်လိပ် ခေါ် ပန်းလိပ်များကို မကွေးတိုင်း ဒေသကြီးအတွင်း မင်းဘူး/စကု မြို့နယ် မုန်းချောင်းနှင့်မန်းချောင်း အကြား ရွှေစက်တော်တောရိုင်း တိရစ္ဆာန်ဘေးမဲ့တောတွင် စောင့် ရှောက်ထားခြင်းဖြစ်ပြီး မြန်မာ့ ကြယ်လိပ်များသည် ဘူးသီး၊ ဖရုံသီး၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ ကန်စွန်းရွက်၊ ဖရုံရွက်၊ ဘူးရွက်၊ သခွတ်ပွင့်တို့ကို စားသုံးသည်။
” ၁၉၉၆ ခုနှစ်လောက်က ဘေးမဲ့တောအတွင်း သဘာဝအတိုင်းသွားလာနေတာပါ။ နည်းမျိုးစုံကြောင့် မျိုးတုံးပျောက်ကွယ်မှာ စိုးတဲ့အတွက် နေရင်းဒေသရဲ့ ပြင်ပမှာ အခုလိုခြံလှောင်ပြီး အစိုးရဘတ်ဂျက်နဲ့ မွေးမြူရတာပါ။ ၁၉၉၆ ခုနှစ်က ကြယ်လိပ်အထီး ခြောက်ကောင်၊ အမခြောက်ကောင် နဲ့စပြီးမွေးထားပြီး လက်ရှိစုစုပေါင်း အကောင်ရေ ၆၄ဝ ခန့်အထိတိုးလာပြီး အစိုးရဘတ်ဂျက်ကနေ ကျွေးမွေးစရိတ်၊ ဆေးဝါးကုသ စရိတ်ပေးထားပါတယ်။ ဒီလိပ်တွေ ရဲ့သက်တမ်းက နှစ် ၁ဝဝ ကျော်ရှိပါတယ်”ဟု ရွှေစက်တော် တော ရိုင်းတိရစ္ဆာန်ဘေးမဲ့တော တော ခေါင်း ဒေါ်အေးအေးချိုက ပြောကြားသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် မြန်မာ့ကြယ် လိပ်ခေါ် ပန်းလိပ်များကို မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ရွှေစက်တော်တောရိုင်း တိရစ္ဆာန်ဘေးမဲ့တော၊ မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး မင်းဆုံတိရစ္ဆာန် ဘေးမဲ့တောနှင့်ပုဂံညောင်ဦး လောကနန္ဒာဘေးမဲ့တောဥယျာဉ်တို့တွင် မွေးထားကြောင်းသိရသည်။
ပါရမီဘေလီတံတား အဆင်း ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနပိုင်မြေပေါ်ရှိ ဆိုင်ခန်းများကို ရှင်းလင်းဖယ်ရှာ?
အီရတ်နှင့် ဆီးရီးယားတို့တွင် အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့် သေဆုံးသူလူအရေအတွက် သိသိသာသာ ကျ?
Spice Girls အဖွဲ့ စက်တင်ဘာလတွင် ဖျော်ဖြေပွဲ ကျင်းပဖွယ်ရှိ